Golaha amniga ee UN oo booqanaya Burundi - BBC News Somali
Golaha amniga ee UN oo booqanaya Burundi
21 Jannaayo 2016
Image caption Burundi waxa ay rabshado ka taagan yihiin tan iyo bishii April ee 2015kii.
Xubno ka tirson Golaha Ammaanka ee qaramada midoobey ayaa maanta oo khamiis ah waxa ay gaari doonaan dalka Burundi si ay u dhiiri geliyaan wadahadalada nabadda iyo in ay isku dayaan soo afjaridda rabshadaha dalkaasi ka jira.
Go'aanka madaxweyne Pierre Nkurunziza ee ahaa in uu mar kale u tartamo xilka madaxtinimada dalkaasi ayaa bishii April ee saandkii tagay waxaa ka dhashay dibad-baxyo iyo afgambi dhicisoobay iyo waliba kacdoon waddanka qarka u saaray colaad sokeeye.
Tani waa booqashadii labaad ee xubnaha golaha amniga ay ku tagaan dalka Buirundi.
In ka yar sanad, waxaa soo baxday in uu sii kordhayo walaaca beesha caalamka ee xaaladda sii hureysa ee Burundi iyo xadgudubyada ka dhanka ah aadanaha.
Sidoo kale sare u qaadidda wadaladdalo dhab ah oo laga yeesha xaaladda siyaasadda, iyo in dowladda lagala hadlo inay aqbasho in ciidamo ka socda midowga Afrika dalkaasi la geeyo waa arrimaha laga wadahadli doono.
Safiirka Faransiiska u fadhiyo UN, waxa uu sheegay ujeedada dheeraadka ah inay tahay in laga hortago in qalalaasaha dalkaasi uu isu badalo xadgudub qabiil ku saleysan. Laakiin muran la’aan xaaladda hadda faraha ayey ka baxday.
Isbuuc ayaa laga joogaa, markii madaxa Qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha aadanaha uu sheegay wax uu ku tilmaamay, kufsi wadareed inay geysteen ciidamada amniga ee Burundi.
Waxaa kaloo uu sheegay in ay jiraan bartilmaameedsi ka dhan ah Tutsi ga oo ay ka dameeyaan Hutuga, maadaama ay deris ahaayeen tani iyo xasuuqii Rwanda.
Waxa uuna hoosta ka xariiqay in dhammaan astaamaha dalkaasi laga arko inay casaan muujinayaan oo xaalladda ay xun tahay.